प्रचण्डसँग अफगानी शान्ति टोलीको जिज्ञासा : जनयुद्धको क्रममा हतियार कहाँबाट जुटाउनु भयो र अहिले ती हतियार कहाँ छ ? — Motivatenews.Com
प्रचण्डसँग अफगानी शान्ति टोलीको जिज्ञासा : जनयुद्धको क्रममा हतियार कहाँबाट जुटाउनु भयो र अहिले ती हतियार कहाँ छ ?
काठमाडौं – नेपाली शान्ति प्रकियाको मोडल अध्ययन गर्न काठमाडौँ आइपुगेको अफगानी टोलीले विहीबार विहान नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेट गरेको छ। अफगानी टोलीले दरवारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा भएको प्रचण्डसँग शान्ति प्रक्रियामा नेपालले अवलम्बन गरेको नीतिका बारेमा छलफल गरेको हो।
भेटमा प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि एउटा नयाँ मोडल भएको बताउँदै नेपालले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेर संसारलाई एउटा सकरात्मक सन्देश दिएको बताएका थिए। नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट नेपाली जनताले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी लगायतका उपलब्धि हासिल गरेको पनि उनले बताए।
‘नेपाली जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन भएकाले यसमा धेरै ठूलो जनताको सहभागिता थियो’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले जनताको अधिकारको निम्ति भएको युद्धलाई नेतृत्व गर्‍यौँ। र, धेरै हदसम्म उनीहरुका अधिकार स्थापित गराउन सफल भयौँ।’
भेटमा अफ्गानस्तान उच्च शान्ति परिषद्की उपप्रमुख पूर्वमन्त्री डा. हबिबा साराबीले अफ्गानस्तानको शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै नेपालको शान्तिप्रक्रियाबाट सिक्न आफूहरु नेपाल भ्रमणमा आएको जानकारी दिइन्।
उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको भन्दै त्यसबाट सिक्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताइन्।
भेटमा भ्रमण दलका सदस्यहरुले नेपालमा जनयुद्धको क्रममा हतियारको स्रोत, पूर्व जनमुक्ति सेनासँग भएको हतियारको अवस्था र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई सहयोग गर्न स्थापना भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रचण्डले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
जनमत संग्रह गर्ने सर्तमा बार्ता गर्दै विप्लव, के विषयमा हुँदैछ जनमत संग्रह ?
विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा टोली घोषणा
प्रधानमन्त्री ओली आज मोरङ जाँदै
भागरथीको परिवारलाई विदेशबाट आउन थाल्यो आर्थिक सहयोग
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
टेम्पोमा पनि मेगा बैंकको क्यूआर कोड सुविधा
संसदीय दलको बैठकमा आउन प्रचण्डलाई ओलीको निम्तो